Ungasicoca njani isikhumba seFaux - Ukucoca Iitips
Ungasicoca njani isikhumba seFaux
IPleather yenye indlela emnandi yesikhumba engabizi kakhulu kwaye kulula ngakumbi ukuyinyamekela. Yenziwe ngezinto zokwenziwa, isikhumba se-faux sithatha ukubamba okumnene ukususa amabala kunye nokususa ubumdaka. Fumana ii-deets ngendlela yokugcina ulusu lwakho lwenkohliso lukhangeleka luhle.
Ukunyanga amabala kwiSikhumba seFaux
I-Faux, i-artificial, synthetic okanye i-fake leather, ekwabizwa ngokuba yi-pleather, yindlela yesikhumba ethandwa ngabantu abaninzi. Isikhumba se-Faux uqobo sivela kwiindidi ezimbini ezahlukeneyo. Unokufumana i-vinyl okanye i-PU (polyurethane). Xa ucoca impahla yesikhumba ye-faux, ufuna ukuthathela ingqaleloimiyalelo yokuhlamba impahlaKwithegi. Ngelixa uninzi lwesikhumba se-faux sinokuhlanjwa, ezinye iimpahla zicocekile kuphela.
Uzihlamba njani iintyatyambo ezingezizo ezenziweyo: Iindlela ezi-5 ezilula
Ungasusa njani iitato zetamatato (nkqu nesosi ebekiweyo)
Ususa njani uMngundo kwisikhumba ngeendlela ezilula
Izixhobo zokugcina ukuHamba
Nokuba uphatha indawo okanye uphantsi kwaye ungcolile ucoce isikhumba sakho sefeksi, kukho izinto ezimbalwa oza kuzifuna.
Isithambisi esincinci kunye naManzi eeNdawo eziSisiseko
Xa kufikwa kumabala amaninzi afana nejusi okanye ikofu, ukusebenza ngokukhawuleza kunokuba sisindisi kwizinto zakho zesikhumba se-faux. Ngenxa yokuba abacoci abanobunzima bangenza ukuba eli laphu liqine okanye lonakalise ubumbano, uya kufuna ukubamba isicoci esincinci njengeIsicoceko soboyaemva koko:
Kwibhotile yokutshiza, xuba malunga nepunipoon yesicocisi ngamanzi aneleyo ukugcwalisa ibhotile.
Tshiza lo mxube kwitawuli ecocekileyo.
Ukukhuhla ngobumnene kunokufakwa kumabala amakhulu.
Ukuqaqadeka okanye ukuseta ngaphakathi kwiindawo ezininzi zesikhumba seFaux
Ukusetha amabala angabonakaliyo okanye amabala anenkani njengeinki okanye idayi, kuya kufuneka umbe nzulu kwibhokisi yakho yezixhobo zokucoca kwaye ubambe utywala okanye iviniga.
Hlanganisa iiviniga ezilinganayo okanye utywala kunye namanzi.
Phinda usebenzise indawo ecocekileyo yelaphu.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Uya kufuna ukuzama oku kwindawo ecekeceke yesicelo sakho kuqala ukuqinisekisa ukuba ayizukulimaza ilaphu. Ngamanye amaxesha ibala elingacacanga lekofu lingangcono kunendawo enkulu yokutshintsha umbala.
Umatshini wokuhlamba iimpahla zeFaux
Ube ngumphathi wethambo ekuphatheni iblukhwe yakho. Kodwa kukho amaxesha apho ibhatyi yakho yesikhumba eyinyani iya kufuna ukucocwa kakuhle, ngakumbi kuba eli laphu lilungile ekubambeni ioyile kunye nobushushu. Yiplastiki emva kwayo yonke loo nto. Xa umatshini uhlamba i-faux yakho yesikhumba, kukho imiyalelo embalwa ekhethekileyo oya kuyilandela:
Qiniseka ukuba idyasi okanye ibhulukhwe yakho iyahlambeka ngomatshini. Awufuni ukuphosa into ethi yicocekile kuphela kwi-washer.
Guqula isiqwenga ngokupheleleyo ngaphakathi.
Sebenzisa amanzi abandayo kunye nomjikelo omncinci wokuhlamba.
Yongeza isepha encinci, ngokwemiyalelo.
Emva kokutsala impahla yakho kwiwasher, yibeke tyaba okanye uyixhome ukuze yome iziphumo ezilungileyo. Unokuwa wome kwindawo epholileyo, ukuba uluhlu lwakho lwethegi luyindlela yokhetho.
Ukususa imibimbi, ungazama ukujija impahla okanye usebenzise umphunga ngentsimbi. Ungaze uchukumise izinto ngentsimbi. Vuka nje uyeke umphunga wenze lo msebenzi.
Ukuhlamba izandla ukuhambisa izihlangu okanye izihlangu
Iipaji zesikhumba ze-Faux kunye nezihlangu zisenokungamiselwanga ukuhlanjwa. Oku akuthethi ukuba awunakucoca, kufuneka usebenzise indlela yokuhlamba izandla.
Bamba isepha yakho emnene kunye neempahla ezimhlophe ezimbalwa.
Kwisinki, xuba icephe lesicoci kunye neekomityi zamanzi ezininzi.
Dipha ilaphu kwaye usike kakuhle.
Sula yonke indawo yesipaji, ibhanti okanye izihlangu.
Ncothula ngobumdaka inkani okanye amabala.
Sebenzisa ilaphu elicocekileyo ukosula owomileyo.
Ungayishiya ngaphandle ukuba yome umoya okanye usebenzise isomisi seenwele kwindawo epholileyo ukukhawulezisa inkqubo.
Nyibilika itispuni yeoyile yekhokhonathi kwaye usebenzise ilaphu elicocekileyo ukumisela imeko yesikhumba sakho sefeksi.
Ukucoca ifanitshala eyenziweyo ngesikhumba se-Faux
Xa kuziwa ekucoceni ifanitshala, unendawo eninzi ngakumbi yokugubungela. Ukongeza, ngaphambi kokuba uqale ukuhlasela nge-faux ecocekileyo yesikhumba kunye ne-conditioner, uya kufuna ukukhupha i-vacuum.
Ukucoca isofa yonkeukulahla nakuphi na ukutya okuqhekezayo kunye namasuntswana omdaka.
Phatha nawaphi na amabala usebenzisa iindlela zokunyanga amabala.
Manzisa ilaphu ngamanzi usule isofa okanye isitulo sonke.
Landela imiyalelo kwisicoci sefeksi / isixhobo sokucoceka ukunyanga isofa yonke.
Ukususa ivumba kwisikhumba esilixoki
Kuba i-faux yesikhumba inokubamba ioyile, ukungcola kunye nokunuka emzimbeni wakho, kufuneka ichithwe. Unokwenza i-deodorize ngaphambi kokuyibeka ixesha lonyaka okanye ukuvuselela ivumba lesingqengqelo sakho. Ukulungisa izixhobo ngokulula kuba yonke into oyifunayo yisoda yokubhaka.
Beka impahla ngaphandle.
Nciphisa ngaphakathi nangaphandle ngesoda yokubhaka.
Ifenitshala, yinike nje into entle yokufefa.
Makhe ihlale iiyure ezininzi.
Nokuba ugungqise okanye ucofe isoda yokubhaka.
Ukufumana ukucoceka kwesikhumba
Isikhumba seFaux okanye i-pleather inokuba yinto eyonwabisayo kunye nefashoni. Ayisiyonto ikhululekile kwaphela ngaphandle kwezilwanyana kodwa kunokuba lula ukuyinyamekela. Qiniseka ukuba ulandela yonke imiyalelo kwithegi xa kuziwa kwinkathalo. Ngelixa iimpahla ezininzi zinokujulwa kwindawo yokuhlamba, ezinye zinokuthatha abacoci abamisayo ukuchukumisa.
Ukuphefumlelwa Kwayeiiingcinga Ngaphakathi Design Slideshows Imbali Yedance Umyili Izikhwama Imbali Yomtshato
izipho zabantu ekunzima ukuzithenga
Iileta zokucebisa ngezifundo zekholeji
iwayini yeklabhu yenyanga yokujonga kwakhona
amakhaya ahambayo okurenta ukuze abe yeyakho
indlela yokukhetha umculi we tattoo
Imibongo ngokufa kothandekayo ziimbongi ezidumileyo